Nehemia 2 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Javaney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Myama Nias Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Alemà Soisa Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Aotrisianina Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Frantsay Belza Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Holandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Irlandey Tenin’ny Tanana Israelianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Jamaikanina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kenianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Kroaty Tenin’ny Tanana Malagasy Tenin’ny Tanana Malezianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Nikaragoanina Tenin’ny Tanana Nizerianina Tenin’ny Tanana Orogoayanina Tenin’ny Tanana Panamianina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Slovenianina Tenin’ny Tanana Soedoà Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanana Zambianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Costa Rica Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Ghana Tenin’ny Tanan’ny avy any Goatemalà Tenin’ny Tanan’ny avy any Honduras Tenin’ny Tanan’ny avy any Malawi Tenin’ny Tanan’ny avy any Mozambika Tenin’ny Tanan’ny avy any Nouvelle-Zélande Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Salvadaoro Tenin’ny Tanan’ny avy any Taïwan Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Ticuna Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tongan Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Waray-Waray Xavante Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
2 Tamin’ny volana Nisana,+ tamin’ny taona faharoapolo+ nanjakan’i Artaksersesy+ Mpanjaka, dia noraisiko ny divay teo anoloan’ny mpanjaka ka natolotro azy toy ny mahazatra.+ Mbola tsy maloka endrika teo anatrehany mihitsy anefa aho, raha tsy tamin’izay.+ 2 Koa niteny tamiko ny mpanjaka hoe: “Nahoana no maloka endrika+ ianao nefa tsy marary akory? Misy zavatra mampalahelo ny fonao mihitsy!”+ Natahotra be aho tamin’izay. 3 Dia hoy aho tamin’ny mpanjaka: “Ho ela velona anie ny mpanjaka!+ Nahoana moa aho no tsy ho maloka endrika? Rava ilay tanàna+ misy ny fasan-drazako,+ ary kilan’ny afo ny vavahadiny.”+ 4 Ary hoy ny mpanjaka: “Inona àry no tianao hatao?”+ Avy hatrany aho dia nivavaka+ tamin’Andriamanitry ny lanitra.+ 5 Dia hoy aho tamin’ny mpanjaka: “Raha sitraky ny mpanjaka,+ ary raha mahazo sitraka eo anatrehanao ny mpanomponao,+ dia mba alefaso ho any Joda aho, any amin’ny tanàna misy ny fasan-drazako, mba hanorina+ azy io indray.” 6 Tamin’izay dia nipetraka teo anilan’ny mpanjaka ny vadiny. Ary hoy ny mpanjaka tamiko: “Haharitra hafiriana ny dianao, ary rahoviana ianao no hiverina?” Koa sitraky+ ny mpanjaka ny handefa ahy, rehefa nolazaiko taminy ny fotoana.+ 7 Dia hoy koa aho taminy: “Raha sitraky ny mpanjaka, dia aoka aho homena taratasy+ ho an’ireo governora+ any ampitan’ny Renirano,+ mba hamelan’izy ireo ahy handeha hatrany Joda. 8 Aoka koa aho homena taratasy ho an’i Asafa, mpiambina ny alan’ny mpanjaka, mba hanomezany ahy hazo hanaovako ny vavahadin’ny Lapan’ny+ tempoly,+ sy ny mandan’ny+ tanàna, ary ny trano hipetrahako.” Koa nomen’ny mpanjaka ahy ireo, araka ny soa nataon’ny tanan’Andriamanitro tamiko.+ 9 Dia tonga tatỳ amin’ireo governora+ tatỳ ampitan’ny Renirano aho, ka nomeko azy ireo ny taratasin’ny mpanjaka. Nisy lehiben’ny tafika sy mpitaingin-tsoavaly koa nalefan’ny mpanjaka niaraka tamiko. 10 Ary ren’i Sanbala+ Horonita+ sy Tobia+ Amonita+ mpanompo izany ka sosotra+ izy ireo, satria nisy olona tonga mba hitady izay hahasoa ny zanak’Israely. 11 Tonga tao Jerosalema aho tamin’ny farany. Ary rehefa avy nijanona telo andro tao aho, 12 dia nifoha tamin’ny alina izaho sy ny lehilahy vitsivitsy. Ary tsy nolazaiko tamin’iza na iza+ izay zavatra nataon’Andriamanitro tao am-poko mba hatao amin’i Jerosalema.+ Tsy nitondra biby fiompy afa-tsy ilay nitaingenako koa aho. 13 Ary nivoaka avy teo amin’ny Vavahadin-dohasaha+ aho tamin’ny alina, dia nandeha tandrifin’ny Loharanon’ny Bibilava Be ary nankeny amin’ny Vavahadin’ny Antontan-davenona,+ ka nandinika ny faharavan’ny mandan’i+ Jerosalema sy ny vavahadiny+ kilan’ny afo. 14 Dia nankeny amin’ny Vavahadin-doharano+ sy ny Dobon’ny Mpanjaka aho, ary tsy nisy lalana handehanan’ilay biby nitaingenako. 15 Mbola niakatra nanaraka ny lohasaha+ falehan-driaka ihany anefa aho tamin’iny alina iny, ka nandinika ny manda. Dia niverina aho, ka niditra teo amin’ny Vavahadin-dohasaha,+ ary nody. 16 Tsy nahalala izay nalehako sy nataoko ireo solontenam-panjakana.+ Ary mbola tsy nilazako na inona na inona ny Jiosy sy ny mpisorona sy ny olona ambony sy ny solontenam-panjakana ary ny sisa tamin’ireo mpanao ny asa. 17 Farany dia hoy aho tamin’izy ireo: “Hitanareo izao fahavoazantsika izao! Rava i Jerosalema ary kilan’ny afo ny vavahadiny. Koa andao isika hanorina indray ny mandan’i Jerosalema, mba hifarana hatreo ny fandatsana antsika.”+ 18 Nolazaiko tamin’izy ireo koa ny soa nataon’ny tanan’Andriamanitro+ tamiko,+ sy ny tenin’ny mpanjaka+ tamiko. Dia hoy izy ireo: “Andao àry isika hanorina ny manda.” Koa nifampahery sy nivonona hanao an’ilay asa tsara izy ireo.+ 19 Nandre izany i Sanbala+ Horonita, sy Tobia+ Amonita+ mpanompo,+ ary Gasema+ Arabo,+ ka naneso+ sy nanamavo anay sady niteny hoe: “Fa inona ity ataonareo? Mikomy amin’ny mpanjaka angaha ianareo?”+ 20 Dia namaly aho hoe: “Ilay Andriamanitry ny lanitra+ no hampahomby izay ataonay.+ Ary hanorina ny manda izahay mpanompony. Fa ianareo kosa tsy manana anjara+ na zo na zavatra ahatsiarovana+ anareo eto Jerosalema.”